A la une – Page 2 – FJKM Ambavahadimitafo A la une |
Publié le 06 mars 2022 à 06:03
A la une.Diakona sy Loholona.Fampianarana
Publié le 05 mars 2022 à 06:03
Mitàna ny teniny ny Tompo. Inona no tokony ataontsika ?
Publié le 27 février 2022 à 06:02
Alahady 27 febroary 2022 , alahady faran’ny volana handinihina ny lohahevitra hoe « Mitàna ny teniny ny Tompo« , nitondran’ny mpitandrina miza-draharaha RANDRIANAMBININTSOA Onja ny hafatr’Andriamanitra araka izany lohahevitra izany. Manàsa anao hiombona amin’ny fanompoam-pivavahana :
Mitàna ny teniny ny Tompo
Publié le 06 février 2022 à 04:02
Alahady 06 Febroary 2022, faha-5 manaraka ny Epifania hibanjinana ny lohahevitra hoe « Mitàna ny teniny ny Tompo ». Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitory ny tenin’Andriamanitra avy ao amin’ny Genesisy 5 : 7-21 « 7Ary hoy Izy taminy: Izaho no Jehovah Izay nitondra anao nivoaka avy tany Oran’ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity ho lovanao.
Hafatra avy amin’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain : « Ary Jesoa niteny…hoe : Matokia, fa Izaho ihany, aza matahotra », Matio 14:27 1. Mampahery sy mivavaka ho antsika noho izao loza manambana eto @firenena izao. 2.Mahatsiaro am-bavaka sy mirary fahasalamana ho an ‘ireo marary rehetra. 3.Mampahafantatra antsika fa MISOKATRA NY FIANGONANA ny Alahady 6 febroary ary manasa antsika
A la une.Fampianarana.Fanompoam-pivavahana
Fiheveran’ny kristiana momba ny aretina
Publié le 30 janvier 2022 à 01:01
Alahady 30 janoary 2022, alahady hitondrana am-bavaka ny ezaka atao hitsaboana ny marary hoditra. Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra fampianarana ny lohahevitra hoe « Ny fiheveran’ny kristiana ny aretina ». Manasa anao hanaraka ny fampianarana :
Publié le 23 janvier 2022 à 01:01
A la une.Fanompoam-pivavahana.MIASAFIA
Publié le 09 janvier 2022 à 06:01